Akkoon isaanii Oromoo kan taate Dr.Neeveel Aleksaandar Du’an Boqotan.
Sanbata Diqqaa, Guraandhalaa 13, 2016 Local time: 07:31
Dr Neeveel AleksaandarxDr Neeveel Aleksaandar
WASHINGTON DC— Ijoollee Oromoo Bara 1888 gabrummaan gurguramanii gara gabaa Jeddaatti ituu geessamaaa jiranii, Humnii galaanaa Briteen kan yeroo sana naannoo Edeen to’ataa ture, giddu seenee ijoollee kana Birmaduu baase. Kanneen gabrummaan qabaman kun 204 yoo ta’an kanneen keessaa ijoolleen 183 turan.Ijoollee kana keessaa 64 gara Afrikaa kibbaatti ergaman.Shamarraan 22 fi dhiira 42 turan.
Shamarran kana keessaa tokko akkoo Dr. Neville Aleeksaandar Bishoo Jaarsaa turte.Gabrummaa keessaa eega baate booda barattee barsiiftuu ta’uuf carroomte.Intalli ishee Dimbitii Bishoo Aleksaander immo Ilmii ishee aangafataa Dr. Neeviile Aleksaandar jedhamu.
Dhukkuba yeroo gabaabaaf isaan mudateen Hagayya 27 bara 2012 umrii isaanii 75tti magaalaa keep Taawoon keessatti du’an boqotan.
Gaaffii fi Deebii MP3 tuquun dhaggeffadhaa
Dr. Neville Alexanderi
Dr. Neville Alexander kutaa 2ffaa
Dr. Neville Alexander kutaa 2ffaai